Art – Min Thayt
★ သီချင်းတွေနဲ့ နေ့တိုင်းလိုလို ကျနော် ထိတွေ့တယ်။ ကျနော်က တေးရေးဆရာတစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ဘူး။ တေးသံရှင် အဆိုတော်တစ်ယောက်လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဝါသနာရှင် သီချင်းသီဆိုသူလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် နေ့စဉ် ကျနော့် နှလုံးကြည်မွှေ့ဖို့အတွက်၊ ထိတွေ့ဖြစ်နေတာက ဂီတနဲ့ သီချင်းတွေ။ သီချင်း​​တွေက ကျနော့် အတွေး အခေါ်ကိုလည်း သယ်ဆောင်ခေါ်ငင်ပေးတယ်။ ကျနော့် ခံစားချက်ကိုလည်း နှိုးဆွပေးတယ်။...
အနည်ထိုင်ချိန်မှာ မင်းရောက်လာ…တေးရေး - စိုင်းခမ်းလိတ်တေးဆို - စိုင်းထီးဆိုင် တကယ်တော့ သီချင်းတွေကို အနက် မဖွင့်ချင်ပါ။ ဖွင့်စရာလည်း လိုမယ် မထင်ပါ။ ကိုယ့်ခံစားချက်နဲ့ ကိုယ်။ ကိုယ့် နှလုံးသားနဲ့ ကိုယ်။ ကိုယ့်ဓာတ်ခံနဲ့ ကိုယ်။ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ်ပေါ့။ အခုလည်း စိုင်းခမ်းလိတ်ရေးပြီး စိုင်းထီးဆိုင် ဆိုထားတဲ့ သီချင်း တစ်ပုဒ်။ သီချင်းကို နားထောင်ပြီး...
ဆရာမြသန်းတင့်က ပြာပုံထဲက နိုးထလာတဲ့ ဖီးနစ်ငှက်လိုလို့ တင်စားပြီး မန္တလေးကို ဖွဲ့ခဲ့ဖူးတယ်။ မန္တလေးဟာ ကမ္ဘာစစ်ဒဏ်ကြောင့် ပြာပုံဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်၊ အလျင်အမြန်ပဲ ပြာပုံထဲက ထမြောက်ပျံသန်းလာနိုင်ကြောင်း၊ မန္တလေးမြို့ရဲ့ အားမာန်ကို ဖွဲ့ဆိုခဲ့တယ်။ ထို့နောက် စစ်ဘေးဒဏ်ကို ရှောင်တိမ်းဖို့ စစ်ကိုင်းတောင်၊ စစ်ကိုင်းချောင်၊ စစ်ကိုင်း - မင်းဝံတောင်ရိုးထဲမှာ အလျှိုလျှိုခိုလှုံနေကြတဲ့ မန္တလေးသူ၊ မန္တလေးသားတွေဟာ မြို့မတီးဝိုင်းနဲ့ အတူ ပြည်တော်ဝင်လာခဲ့ပုံကို...
Min Thayt January 19, 2022 January 20, 2022
ငါ့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တေးရေး / တေးဆို - ဖိုးကာhttps://www.youtube.com/watch?v=p6m4_qp9KCY https://www.youtube.com/watch?v=p6m4_qp9KCY ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ရင် လူတွေဟာ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ များလိုက်တာ။ သိုဝှက်ရတာတွေ၊ ဖုံးကွယ်ရတာတွေ၊ ဟန်ဆောင်ရတာတွေ။ ခံစားချက်ဟာ ဖွဲမီးလို တငွေ့ငွေ့ အုံပုန်းလောင်ကျွမ်းနေတာဟာ ပြင်းထန်တဲ့ ဝေဒနာလို့ ကျနော် ပြောချင်တယ်။ ဖော်ပြခွင့်မရတဲ့ ခံစားချက်​တွေ ဘယ်လောက်များပြားနေမလဲ။ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင်၊ အကြောင်းရေစက်တွေကို မျှော်ကိုးတောင့်တနေတာကလည်း သောကဒုက္ခပဲ မဟုတ်လား။...
Essay General Perspective
• တေးရေး - စိုင်းခမ်းလိတ်• တေးဆို - စိုင်းထီးဆိုင်• သီချင်း - https://www.youtube.com/watch?v=RYvubvXmH2I စကားလုံးတွေက ဘယ်လောက် လှသလဲ…ကြည့်စမ်း။ သဘောထားကြီးမှု၊ ဖေးမမှု၊ စိတ်သဘောထား ကျယ်ပြန့်မှု၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ကြင်နာမှု၊ ကရုဏာ၊ ကိုယ်ချင်းစာနာမှု၊ လူ့သဘောတွေ၊ အကောင်းမြင်နိုင်စွမ်း၊ ကတိကဝတ် စတဲ့အရာတွေ အားလုံးကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ တွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုတာထက် ခံစားလိုက်မိတယ်လို့ ပြောရင်...
Min Thayt October 28, 2021 October 28, 2021
• တေးရေး တေးဆို ဝေလ• သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသု• ဒါရိုက်တာ ဏကြီး• သီချင်း - https://www.youtube.com/watch?v=7IpTPxca7w8 • မှတ်ချက်။ ။ သီချင်းကိုလည်း နားထောင်ပါ၊ ရုပ်သံဗီဒီယို သရုပ်ဖော်ကိုလည်း ကြည့်ပါ။ အဆိုတော် ဝေလဟာ ဒီသီချင်းကို ဘယ်နှခုနှစ်က ရေးတယ်လို့ မသိပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးနှစ်လောက်က (၂၀၁၅ - ၁၆)...
Min Thayt January 6, 2021 January 6, 2021
• စာပေ၊ အနုပညာမှာ အသက်ရှည်မှုနှုန်း ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ စာအုပ်တွေကို ကြည့်လိုက်ပါ။ သီချင်း ဂီတတွေကို ကြည့်လိုက်ပါ။ တခြားသော အနုပညာရပ်တွေလည်း အလားတူပဲဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ လူတွေနဲ့ အမြဲတမ်းလိုလို ထိတွေ့နီးစပ်နေတာကတော့၊ ဂီတနဲ့ စာပေလို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။ • သီချင်းဂီတလို့ပဲ ဆိုဆို၊ စာအုပ်စာပေလို့ပဲဆိုဆို…. ရာသီပေါ်တွေလည်း ရှိသလို၊ ရာသီကို လွန်ရင်...
သူတို့ သူတို့…. သူတို့
စာပေနဲ့ အနုပညာအလုပ်ဟာ လူတွေရဲ့နှလုံးသားကို ညှို့ငင်ပြီး လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့နှလုံး သားကို ညှို့ငင်ပြီး လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်လို့၊ အနုပညာ ဖန်တီးသူဟာ နှလုံးသားအရည်အသွေးလိုတယ်။ နှလုံး သားအရည်အသွေး နိမ့်တဲ့လူဟာ စာပေ အနုပညာကို ဖန်တီးရင် ရေရှည် မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။ ရေရှည် မပေါက် မြောက်နိုင်ဘူး။ လူအများရဲ့ နှလုံးသားမှာ ရေရှည် မစွဲထင်နိုင်ဘူး။ လူတော်တော်များများရဲ့ နှလုံးသားကို အား...
Min Thayt March 8, 2017 September 6, 2019
အသွင်ကွဲပြားပြီး၊ ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောဆောင်တဲ့ သီချင်းဂီတအမျိုးမျိုးကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်နား ထောင်ခဲ့တာ တောင် အတော်ကြာပြီ။ ကျွန်တော်က တေဘုမ္မာကနေ ဂျေမီ အထိ နားထောင်သည်။ ကြိုက်လည်း ကြိုက်သည်။ အင်း… တွေးကြည့် တော့ တစ်မျိုးကြီးပဲ လို့ တွေးမိနေသေးသည်။ တခါတရံ ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် နားမလည်။ အောင်ခြင်းရှစ်ပါး သီချင်းလည်း၊ ကြိုက်သည်။ သီတဂူဆရာတော်ကြီး သာသနာပြုသီချင်းလည်း ကြိုက်သည်။...